KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Ciidamo Jabuutiyaan ah oo la geeyay Gobolka Hiiraan
Friday 4 May 2012 11:14
Ciidamo Jabuutiyaan ah oo la geeyay Gobolka Hiiraan
Beledweyne (Keydmedia) - Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in Gobolkaasi ay Xalay gaareen Ciidamo Jabuutiyaan ah oo hordhac u ah kuwa AMISOM ee la qorsheyay inay ka howlgalaan halkaasi.
Tirada Ciidamadan oo gaaraya illaa 300 oo Askari ayaa dadka Goobjoogiyaal ah waxa ay sheegayaan in Ciidamada Jabuuti ay degeen Saldhig weyne oo ay Ciidamada Amraaxadda ah ku leeyihiin Isgoyska Kalabeyr,duleedka Beledweyne, waxaana la tilmaamay in Ciidamada ay yihiin kuwa si aad ah hubaysan oo wat Gaadiid dagaal iyo Hub culus.
Ciidamada oo kasoo galay Xadka Itoobiya ayaa la sheegay in Maanta lagu wado inay galaan Gudaha Magaalada Baladweyne ee Xaruunta Gobolka Hiiraan halkaasi oo ay gacanta ku hayaan Ciidamada Amxaaradda ah iyo kuwa dowladda KMG ah ee Soomaaliya, iyadoo ammaanka Magaalada si aad ah loo adkeeyay.
Ciidamada Jabuuti ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay la socdaan Saraakiil Faransiis ah oo qaabilsan dhinaca Ammaanka, iyadoo la filayo in Xarumo waa wayn oo ku yaalla Magaalada Baladweyne ay degaan Ciidamadaasi.
Tallaabadn ayaa qeyb ka ah Qorshaha Howlgalka AMISOM kaasi lagu geynayo Ciidamo Dhamaan Gobolada ku yaalla Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya halkaasi oo qeybo ka tirsan hadda ay gacanta ku hayaan Ciidamo isgaransana oo ka kooban Soomaali iyo Amxaaro,kuwaasi oo Al shabab kala wareegay dhowaan dhowr magaalada oo muhim ah.
Horey ayaa Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda KMG ah iyo AMISOM ay u sheegeen in Baladweyne la gaarsiin doono Ciidamada Jabuuti si halkaasi ay kala wareegaan Ciidamada Ethiopian-ka ah ee ka saaray Kooxda Al Shabaab.
Keydmedia.net - Xafiiska, Beledweyne